निर्मलाको नाममा अझै पनि भ्रम फैलाउन मै व्यस्त अनलाइनहरु – MySansar
निर्मलाको नाममा अझै पनि भ्रम फैलाउन मै व्यस्त अनलाइनहरु
Posted on September 7, 2021 September 3, 2021 by Salokya
३ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्मला पन्तका हत्याराले सजाय पाउन सकेको छैन। यो केसमा के नेता, के राजनीतिक दल, के मिडिया, के पत्रकार- सबले आफ्नो स्वार्थको रोटीमात्र सेके। दोषीले सजाय नपाउने गरी हल्लाको पछि लागेर वातावरण बिगार्नमा क-कसको हात रह्यो भन्ने बारे #WhoKilledNirmala शृङ्खलाका ३० भागमा धेरै कुरा खुलाइसकेको छु। छुटाउनु भएको भए यहाँ क्लिक गरी पढ्न सक्नुहुन्छ। ३० भागपछि माइसंसारमा पनि फलोअप भइरह्यो। पुराना ब्लगहरु यहाँ क्लिक गरी पढ्न सक्नुहुन्छ। दुःख लाग्छ, अझै पनि निर्मलाको नाममा भ्रम फैलाउन अनलाइनहरु लागिरहेकै छन्। अझै पनि ‘बिक्ने’ चिज भएको छ उनीहरुका लागि निर्मलाको नाम।
‘निर्मला पन्तको हत्यारा अब महिनामा होइन, दिनमा पत्ता लाग्नेछ।’
‘निर्मला पन्तको हत्यारा अब २० दिनभित्रै पत्ता लागिसक्नेछ।’
उत्तम दाइ (डिआइजी उत्तम सुवेदी) ले निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाए… आदि हेडलाइनका समाचारहरु तपाईँहरुले पनि पढ्नुभएको होला। महिना होइन दिनमा, २० दिनमा भनेर समाचार लेखेर झुक्याएको पनि ६ महिना भइसकेछ।
यी मिडियाहरुलाई के सुर चल्ने हो, सुरुमा पनि हल्लैहल्ला मच्चाए। अहिलेसम्म पनि त्यस्तै हल्लामै रमाइरहेका छन्। केही दिनअगाडि फेरि अर्को हल्ला लिएर आए मिडियामा- देउवा सरकारले पत्ता लगायो निर्मलाको हत्यारा। सनसनीपूर्ण समाचार फेसबुकमा राखेर डलर कमाउनेमा मात्र ध्यान हुने अनलाइनका नाममा कलंकहरु मात्र होइन, सूचना विभागमै दर्ता भएका अनलाइनले पनि यस्तो हचुवा समाचार राखेको पाइयो।
उदाहरणका लागि यो हेर्नुस् सूचना विभाग दर्ता नम्बर : १४२/०७३-७४ रहेको मोटिभेट न्युज नामको अनलाइनले भदौ ११, २०७८ मा लेखेको समाचार र शीर्षक–
बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले त्यस्तो बोलेकै थिएनन्। कहाँ गृहमन्त्रीले हत्यारा पत्ता लागिसक्यो भनेर बोल्छन् त। पत्ता लागिसकेको भए त पक्रनु पर्‍यो, मुद्दा चलाउनु पर्‍यो। गृहमन्त्री, आइजी, प्रहरीले भन्ने भनेको त अनुसन्धान भइरहेको छ मात्रै हो। त्यो दिन पनि गृहमन्त्रीले त्यही आशय मात्र पोखेका हुन्।
तर समाचार चाहिँ देउवा सरकारले हत्यारा पत्ता लगाइसक्यो भनेर भ्रम फैलाउने गरी आयो। कुन स्वार्थमा यसरी समाचार लेखिएको होला?
त्यो समाचार एउटा मात्र अनलाइनमा होइन, विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरुमा क्लिक गराएर कमाउने उद्देश्य राखेका अनलाइनहरुमा पनि छ्याप्छ्याप्ती भयो। हेर्नुस् उदाहरण-
यस्ता अनलाइनहरु फेसबुक पेज र ग्रुपहरुमा हुने सेयरको भरमा चलेका हुन्छन्, डोमेन जेसुकै होस्।
चर्चित व्यक्तिहरुको नाममा फेसबुक ग्रुप बनाएर त्यसमा यस्ता समाचार कपिपेस्ट हुन्छन्। यी समाचारहरुको हेडलाइनदेखि न्युज र फोटोसम्म एउटै हुन्छ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तीन वर्षअघि यस्तै अनलाइनहरुले हुँदै नभएको हल्ला यसरी नै फैलाएका थिए।
उनीहरुले फैलाएका हल्लाकै कारण नभएको कुरा पनि भएको जस्तो हुन थाल्यो, झुट पनि साँचो लाग्न थाल्यो।
यस्ता अनलाइनहरुले धेरैलाई भ्रममा पारेका हुन्छन्। सामान्य पाठकलाई त कुन नामको न्युजपोर्टलमा समाचार आयो थाहा पनि हुन्न। फेसबुकमा आयो, लिङ्क क्लिक गर्‍यो-पढ्यो।
यस्ता अनलाइन चलाउनेहरु पत्रकार पनि हुन्नन्। किन पत्रकार हुनुपर्‍यो? किन पत्रकारिता पढ्नुपर्‍यो? उनीहरुको एकमात्र उद्देश्य- पाठकले क्लिक गरेर पढ्नु पर्‍यो। त्यसका लागि जुनै हदसम्म पनि जान तयार।
यस्ता अनलाइनहरुकै कारण वास्तविक पत्रकार र पत्रकारिता पनि बदनाम भइरहेको छ। सामान्य पाठकलाई त के थाहा- यस्ता हावा, पत्रकारिताको पनि नजान्नेले लेखेको पनि अनलाइन समाचार, ठूलो लगानी गरेर चलेका कान्तिपुरले लेखेको समाचार पनि अनलाइन समाचार।
त्यस्ता अनलाइन चलाउने कसैले यो ब्लग पढिरहनुभएको छ भने मेरो अनुरोध- तपाईँका लागि के पैसा नै सबै थोक हो? यस्तो संवेदनशील विषयमा भ्रम फैलाएर कमाएको पैसाले तपाईँलाई एक दिन पोल्छ जस्तो लाग्दैन? एकचोटी आफ्नो अन्तरआत्मालाई सोधी हेर्नुस् है।
निर्मलाकै केसमा कुनै एउटा स्वार्थमा जेलिएको पत्रकारले आफ्नो मिसनका लागि जस्ता हल्ला फैलाए, त्यसलाई बढाइ चढाइ गरी फैलाउने काम यस्तै अनलाइनहरुले गरे। यो केसमा त अझ मूलधारकै मिडियाहरु समेत बहकिए। मूलधारका मिडियाहरुले धर्म नछाडेका भए यो केस त्यति बिग्रिँदैन पो थियो कि।
प्रहरीले अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरेका दीलिपसिंह विष्टलाई अपराधी हुनै नसक्ने, ऊ त केटीहरुलाई आँखा उठाएर पनि नहेर्ने, गौतम बुद्ध जस्तो, राम्ररी हिँड्न पनि नसक्ने बौलाहा भनेर प्रचार गरियो। तर मैले उनलाई भेटेर कुरा गर्दा चलाइएका हल्ला भन्दा बिल्कुल फरक पाएँ। यसबारे मैले युट्युबमा भिडियो राखेको थिएँ, छुटेको भए हेर्नुस्-